Geofumadas ... 2 wikileaks ka hor intaysan dhicin 2011 - Geofumadas
Disember, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley, egeomates My
Saddex maalmood ka hor intaan 2011 dhamayn, waxaa la ii oggolaaday inaan la xiriiro ugu yaraan labadan novel kuwaas oo isbedelaya nolosheena 2012:
1 Microsoft wuxuu iibsanayaa Bentley Systems.
Sida la maqlay, Microsoft waxay gaartay heshiis kama dambeys ah si ay u soo iibsato Bentley Systems oo asalkiisu yahay Bentley Infrastructure 500; Tirada aan weli la garanaynin, laakiin waxa ay ina xusuusineysaa sababta ay wadashaqeyntu ula xiriirto AutoDesk sanad ka hor. Sababta Sababta Xafiiska Ribbon iyo u egtahay V8i, Maxay tahay sababta dgn-imodel se Akhriso Muuqaalka, Windows7 iyo Excel, go'aanka weyn ee walaalaha Bentley halkii ay shirkadda u gelin lahaayeen suuqa saamiyada.
2 G! ToolsConnect waa dhalan.
Waxaan rajeyneynaa ka hor dhamaadka sanadka si aan u soo saarno nooca ugu horeeya ee G Tools Tools Connect, codsi lagu sameeyey Google Earth API kaasoo u oggolaanaya waxyaabo kale:
Iyada oo Google Earth furan tahay, gawaarida qalabka AutoCAD. Si arrintan loo sameeyo, kaliya aad leedahay si aad haysato laysanka firfircoon ee AutoCAD, kaas oo noqon kara waxbarasho iyo xataa maxkamad, ka waddaa rakibayo iyo in qaadaa oo dhan UI dll la layers optional, sida baddhamada iyo line amarka ka Google Earth.
AutoCAD gudaha Google Earth!
Maxaa waxaa lagu gaarayaa by this waa in ka shaqeynayaan ee baddhamada aad hore u Google Earth (waxa ku dhaca waa in aanay jirin badhamada si aad u bilowdo), ka faa'iidaystaan ​​iman kara ee SNAP AutoCAD sida keliya fallaadhaha shaqeeya, image ka dhigi doonaa oo kaliya soo jiidashada taariikhda taariikheed ee labada geesood ee Google. Iyadoo kiiska lakabyada, waxaa kaliya oo ah ActiveX kaas oo u aqoonsanaya xulashada dhirirka lakabka ee AutoCAD. Xogta joometeriga lagu keydiyo kml waxaa loo beddelaa xoynta xml ee ku jirta dwg, inta soo hartay waa astaamaha xayiraadda.
Haysashada AutoCAD furan, nuqul faylasha earthps.dll, npgeplugin.dll iyo dhowr layn ee PCOptimizations.ini waxay kicin kartaa Google Earth sida lakabka, si tartiib ah, sida muuqaal ama asirkan asenkronous. Sidoo kale waxa PlexEarth sameeyo, laakiin adoo isticmaalaya codsi dibadeed laakiin la shaqeyn doona Google Earth oo runtime ah sida KloiGoogle.
Naqshadaynta Google Earth DirectX kuma mashquulin wax ka badan sidii loo dhisay labada barnaamijba. OpenGL waxay ka sameysan kartaa browser, kaliya waxay u baahan doontaa khayraad badan ama ugu yaraan kaararka garaafka (Waxay ka dhigan tahay inuusan ku ordo buugaagta netka ee 300)
Waxaa laga yaabaa inay sidaas oo jidka DirectX hoos magaalo leh xallinta sare, sidaas bedelay npgeinprocessplugin.dll la isticmaalayo Google Earth Pro in la xal sare iman lahaa, oo lagu kaydin doono in kayd ah in ay ka shaqeeyaan sidii Google ma Guryaha la qaadi karo. Waxaa cajiib ah in .dll isla hoggaansamaa AutoCAD ku .arx xamuulka raster ah, taasoo ka dhigeysa xogta AutoCAD eekaan kartaa wms aan Civil3D ama AutoCAD Map.
Inta ugu sarreysa, qalabku waa bilaash.
Shuruudaha Heshiiska Bentley iyo Microsoft iyo Gmail ToolsConnect Waxaad soo dejisan kartaa boggan.
Post Previous«Previous Boosto ka badan bilaha 50
Post Next koorsooyinka GIS Online ee Spanish, qaar ka mid lacag la'aan ahNext »
2 Jawaab "Geofumadas ... 2 wikileaks ka hor intaan 2011 dhamaadey"
Waan ka xumahay Waxay ahayd Maalintii doqonnada ee nacasnimada ...
Microsoft ma iibsan Bentley Systems.
Carlos Aular isagu wuxuu leeyahay:
: '(Taasi ma ahan, dadka!